Kuyini ukwahlukahlukana? I-Amazon iyahlukahluka futhi ihambise ukudla ekhaya. | Ezezimali Zomnotho
Kuyini ukwahlukahlukana? I-Amazon iyahlukahluka futhi ihambise ukudla ekhaya.
U-Alejandro Vinal | | izinkampani
Lapho ngibhala i-athikili entsha yezindaba angithandi ukuthi ihlale iyindatshana efundisayo, kepha ngincamela ukuchaza, okungenani ngokubanzi, lezo imiqondo yezomnotho noma izinkampani ezikhonjiwe ukuze ngale ndlela sizibeke kumongo futhi siziqonde kangcono izindaba.
Kulokhu, umqondo osebenzayo owokuthi ukwehluka kwebhizinisi:
1 Kuyini ukwahlukahlukana?
2 Yini icala elithile le-Amazon?
Yebo, zonke izinkampani zifuna futhi ziphenye ukuthi zingakuthola kanjani izinzuzo zokuncintisana, Inzuzo yokuncintisana yisici okufanele inkampani isithuthukise ukuqinisa isikhundla esihle maqondana nalabo esincintisana nabo futhi ngale ndlela, ukwanda izinzuzo zayo.
Ngalokhu, inkampani kufanele ilandelele yimaphi amasu izoqhubeka emkhakheni wokuncintisana, wokusebenza nowezinkampani. Sizokhuluma ngezimbili zokuqala ezihlokweni ezizayo.
Isu lokusebenzisana, ngakho-ke nguyena oqonda izinqumo zenkampani mayelana nokuthi amabhizinisi akuphi ukuncintisana nokuthi imiphi imikhakha ezoyeka ukuncintisana kuyo, okungukuthi, ububanzi bezenzo zayo.
Lapho izinkampani kufanele zenze izinqumo ngamasu ezinkampani, kufanele zizenze ngokuya I-3D: mpo, ezindawo kanye nendawo evundlile, ngokulinganayo, sizokhuluma ngezimbili zokuqala ngokuzayo.
Mayelana ne ubukhulu obuqondile, inkampani kufanele inqume ukuthi izoncintisana kumiphi imikhakha, okungukuthi, uma ithatha isinqumo sokuhlukahluka.
Lapho sesiwakhele umqondo wethu, singasho ukuthi ukwehluka kwebhizinisi kuqukethe ukunweba i- isikhwama sebhizinisi yenkampani enikela ngemikhiqizo emisha noma engena ezimakethe ezintsha.
Ngaphakathi kwalokhu kuhlukahluka, bayabonakala izinhlobo ezimbili ezihlukene:
Ukwehluka okuhlobene: Lapho kunokuxhumana okuthile noma ukuxhumana phakathi komkhakha omdala nalowo omusha. Isibonelo, lapho i-apula lenkampani, elizinikele ekusungulweni kobuchwepheshe, linquma ukwehlukahluka futhi livulekele umhlaba wezingcingo zomakhalekhukhwini ngo-2007 (nomkhakha wezobuchwepheshe).
Ukwahlukahluka okungahlobene: Lapho bungekho ubudlelwano phakathi kwamabhizinisi kunobudlelwano bezezimali, okungukuthi, imvelaphi yezinsizakusebenza. Isibonelo, inkampani i-TATA ezinikele emikhakheni engafani, njengokutshalwa kwetiye noma ukwenziwa kwezimoto. Njengoba sibona, abahlangani lutho nomunye nomunye.
Yini icala elithile le-Amazon?
Icala le-Amazon liyicala difícil ukuhlukanisa kusukela ngakolunye uhlangothi, kumayelana nokuhweba okuku-inthanethi, umkhakha okhethekile kuwo, umkhiqizo abawunikezayo ukudla, umkhakha lapho kuze kube manje bebengekho, ngombono wami, umuntu angakhetha ukukhuluma ngokuhlukahluka akuhlobene.
Ukwehlukahluka okwenziwa yiAmazon okwenziwe ngezinsizakalo ezimbili ezihlukene, kepha ezihambisanayo kumakhasimende ayo:
Okusha kwe-Amazon, isevisi yokulethwa kokudla, evumela amakhasimende uku-oda ukuthenga kwawo futhi akuthole ngaphansi kwamahora angama-24. Insizakalo engajatshulelwa eSeattle kusukela ngo-2013 kepha ayikafiki eYurophu kuze kube nguSepthemba walo nyaka, ikakhulukazi i-Germany ne-Austria.
I-Amazon Local, uhlobo lwe-JUST EAT, okungukuthi, ipulatifomu eku-inthanethi lapho izindawo zokudlela "zibhalisa khona", kulokhu, okwamanje, kusuka eSeattle, futhi okubaxhumanisa namakhasimende afuna ukuthi abathumelele ukudla osekuphekiwe ekhaya . Ukwenza i-Amazon njengomxhumanisi nje obeka amakhasimende ukuxhumana nezindawo zokudlela futhi kuya ngentengo kanye nokuthunyelwa kwalokhu kwamuva.
Mhlawumbe kungekudala sizobona lezi zinsizakalo zivela ku-giant giant to izwe lethu, yize ngaleso sikhathi ngithemba ukuthi sebenazo indlunkulu yentela eSpain, ngakho-ke ungenzi i- ukuncintisana okungafanele ngokumelene nalezo zinkampani ezenza ngokuvumelana nomthetho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Kuyini ukwahlukahlukana? I-Amazon iyahlukahluka futhi ihambise ukudla ekhaya.
Ungayonga kanjani imali ngama-commissions emakethe yamasheya?
Ngabe i-e-commerce isinikeza impilo engcono?